ယခုဆိုလျှင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးအသွင်သို. ကူးပြောင်းလာခဲ.သည်မှာ ၂နှ စ်ခွဲကျော် (အစိုးရ/လွှတ်တော် သက်တမ်းတစ်ဝက်ကျော်)သို. ရောက်ရှိခဲ.ပြီ ဖြစ်သည် ။ ကုန်လွန်ခဲ.ေ သာ ကာလကို ပြန်ပြောင်းကြည်.လျှင် ပြည်သူလူထုအားလုံး ဒီမိုကရေစီစနစ်အကြောင်းကို သေသေချာချာ သိ သူများ အင်မတန် နည်းပါးကြောင်း လေ.လာတွေ.ရှိရပါသည် ။
ဒီမိုကရေစီ ယဉ်ကျေးမှု. ၊ ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားတွေကို နိုင်ငံရေးသမားတွေ ၊ ခေါင်းဆောင်တွေပဲ သိ ဖို. လိုအပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သာမန် သူလိုကိုယ်လို ရပ်သူရွာသားတွေကအစ ပြည်သူတွေအားလုံး သိဖို. လိုအပ် ပါတယ် ။ ဒီမိုကရေစီကို ထူထောင်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူလူထုရဲ. အသိအမြင် ၊ အတွေး အမြင်တွေ ဟာ မြင်.မား နေဖို. လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ပြောပြဖို.တောင် လိုအပ်မည် မထင်ပါ ။ အဲဒီလို မြင်.မားေ နဖို.ဆို ရင် ပညာရှင် ဆိုတဲ.သူတွေ ပညာတက်တွေဟာ သာမန်ပြည်သူတွေရဲ. ဘ၀ ၊ လိုအပ်ချက်တွေ ဆန္ဒတွေနဲ. ကိုက်ညီတဲ. အတွေးအခေါ် ၊ အယူအဆတွေကိ်ု ပြောဆို ၊ရေးသား၊ ဖြန်.ချီ ၊ ထုတ်ဝေနေဖို.လည်း လိုအပ် ပါတယ်။
မိမိတို.နေထိုင်တဲ. နိုင်ငံကို ပြည်သူတွေကပဲ ပိုင်ပါတယ်။ နို်င်ငံကို ဘယ်အဖွဲ.အစည်း ၊ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှ မပို င် ပါဘူး ။ သူလိုကိုယ်လို သာမန်နိူင်ငံသား ပြည်သူတွေကပဲ ပိုင်ဆိုင်ကြတာပါ ။ သမ္မတဆိုတာ ကလ ည်း နိုင်ငံတော်ကို မိမိတို. ကိုယ်စား ခဏတာ အုပ်ချုပ်ဖို. ရွေးချယ်ထားတဲ. ကိုယ်စားလှယ်ပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင်.လည်း သမ္မတ ရွေးချယ်ရာမှာ ဥာဏ်အမြော် အမြင်ရှိသူ ၊ ပြည်သူလူထု အကျိုးကို လိုလားသူ ကို သာ ရွေးချယ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီမိုကရေစီ ၀ါဒဆိုတာ အစိုးရမင်းတွေရဲ. ထင်ရာမြင်ရာ ၊ လုပ်ချင်တာကို လုပ်ဖို. အသိအမှတ်မပြုပါဘူး ။ အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူတွေ စေခိုင်းရာကို လုပ်ဖို.အတွက် ဖွဲ.စည်းထားတဲ. အဖွဲ.ပဲလို. သတ်မှတ်ထားတာပါ ။ ယနေ.ခေတ်က လူတစ်ယောက် (သို.) လူတစ်စုက တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ထင်သလို လုပ်ပြီး အုပ် ချုပ်တဲ. ခေတ် မဟုတ်တော.ပါဘူး ။
ပြည်သူတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ သူတို.ရဲ. ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဆန္ဒမဲတွေနဲ. ရွေးချယ်ကြပါတယ် ။ အဲဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကမှတဆင်. ပြည်သူအားလုံး လိုက်နာရမယ်. ဥပဒေတွေကို ရေးဆွဲပြဌာန်း ကြပါ တယ် ။ ဒါကြောင်. ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပြုလုပ်တဲ. ဥပဒေတွေဟာ ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်တဲ. ဥပေ ဒတွေ လိုပါပဲ ။ ပြည်သူအားလုံးကလည်း ဒီဥပဒေကို လိုလိုချင်ချင် လိုက်နာရပါမယ် ။
သို.သော် ယခုလက်ရှိမှာတော. ပြည်သူအများစုဟာ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ ဖြစ်နေပါတယ် ။ သူ များ အော်လို လိုက်အော်နေတာ ၊ သူများပြောလို လိုက်ပြောနေတာ များပါတယ် ။ အများစုသော ပြ ည် သူတွေက ဒီမိုကရေစီ ရရင် ငါတို.ဘာလုပ်လုပ် လုပ်လို.ရပြီလို. ထင်နေကြပါတယ် ။ စစ်အစိုးရဘ က် က ပြုပြင်ဖို. လိုနေသေးသလို ပြည်သူတွေ အနေနဲ.လည်း ပြင်ဆင်ရမယ်. အချက်တွေ အများကြီး ရှိနေပါေ သးတယ် ။ ယနေ.ခေတ် Social Network တွေ အသုံးပြုနေကြတဲ.အချိ်န်မှာ ဘယ်အရာမဆို ဖုံးကွယ် ထားဖို. မဖြစ်နိုင်တော.ပါဘူး ။ ပွင်.လင်းမြင်သာမှု.နဲ.အတူ လူအများရဲ ဝေဖန် အကြံပြုသံတွေကို ခံစားရမှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သတင်းတွေ အတော်များများ ဖတ်ကြည်.မိရင် ပြည်သူတွေရဲ. စိတ်သဘောထားတွေကို သိနိုင်ပါတယ် ။ ယနေ.မှာတော. တိုင်းပြည်တိုးတက်တာက နည်းနည်း ၊ မှုခင်းတွေ ဖြစ်တာက များ များ ဖြ စ်နေပါတယ် ။ ဘာကြောင်.လဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည်.ပါ ။ အခြေခံ အကျဆုံးလို. ပြောရရင် ပြည်သူတွေရဲ. ဆင်းရဲမွဲတေမှု.ကြောင်.လို. ပြောကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အစိုးရက ပြည်သူတွေကို အခွင်.အရေးတွေ လုပ်ပိုင် ခွင်.တွေ မပေးနိုင်တာလည်း ပါပါတယ် ။ အဓိက အကျဆုံးက လူတွေရဲ. စိတ်ဓါတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီ စိတ်ဓါတ်တွေကို ပြုပြင်မှသာ ကျွန်တော်တို. နိုင်ငံဟာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ် အရာမဆို သေသေချာချာ ရေရေရာရာ မသိဘဲ စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ. လုပ်တက်ကြတာ ကျွန်တော်တို. မြန်မာ လူမျိုးတွေရဲ. အကျင်.ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူအတော်များများမှာ ဒီလို အကျင်.ရှိနေကြပါတယ် ။
အရင်ကဆို အာဏာရှင်တွေကို ဝေဖန်ရင် အဖမ်းခံရပေမယ် အခုဆိုရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝေဖန်လို. ရ ပါပြီ ။ သို.သော် လည်း မိမိ ဝေဖန်မယ်. အကြောင်းအရာကို သေသေချာချာ သိရှိပြီး ပိုင်ပိုင်နိုင်နို င် ပြော တက်ဖ်ို.တော. လိုအပ် ပါတယ် ။ သတင်း ဖြန်.ဝေခြင်းဟာ ဒီမိုကရေစီအတွက် အင်မတန် အရေးပါပါတယ် ။သာမန်ပြည်သူတွေ အနေနဲ. သတင်း အမှန်ကို ရအောင်ရှာဖွေဖို.နဲ. ရရှိလာတဲ. သတင်းတွေ ကို ကောင်းေ ကာင်း အသုံးချ တက်ဖို. ကလည်း လိုအပ်ပါတယ် ။ ကိုယ်ရရှိလာတဲ. သတင်းတွေကို ကို်ယ်ထက်ပိုပြီး တ က်သိနားလည်တဲ. မိတ်ဆွေ တွေနဲ. တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပြီး သူတစ်ပါးကို ပြန်လည် ဖြန်.ဝေဖို.လည်း လိုအပ် ပါတယ် ။ ကိုယ်နဲ. ပတ်သက်တဲ. ပြဿနာတွေကို စုပေါင်းတိုင်ပင်ပြီး မလုပ်ရင် လက်တစ်ဆုပ်စာ လူစုက လာပြီး အားလုံးကို ချုပ်ချယ် သွားပါလိမ်.မယ် ။ ဒါကြောင်. ပြည်သူလူထူအားလုံး လက်တွဲပြီင်္း မိမိတို. ကို ယ်တိုင်လည်း ပြုပြင်ပြီး တခြား ပြုပြင်သင်.တာကို လက်တွဲညီညီ ပြုပြင်နိုင်မှသာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ရှင်သန် ကြီးထွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။